၃D ကားဂိမ္း-ကစားခံ ၃D လိင်ဂိမ်းများ
ဧည့္ခန္းဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်အတွက်ဆောင်တတ်၏ဒါကြောင့်အများအပြားအေးမြမှုအရာ။ ကျနော်တို့အစွမ်းထက်နည်းပညာစေကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအများကြီးပိုပြီးစီမံခန့်ခွဲ။ အရန်အသုံးပြုသည်၊ထိုသို့မြင်ယောင်ကြည့်ဖို့ခက်သည်ဘယ်လိုလူတွေသုံးဖို့အသက်ရှင်သောမီ။ တဦးတည်း၏အကြီးမားဆုံးသောတီထွင်မှုသေချာသည်။ အနက်ဆုံးသမုဒ္ဒရာဘယ်ကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အရှိဆုံးအပိုင်ထိုက်သောအမှုအရာလာဖို့စိတ်ထဲ။ ဒါဟာအရမ်းကိုအဆင်ပြေညမ်းချစ်သူများတစ်ဦးရှိသည်သောသူ၏ကျယ်ပြန့်လုပ်ဖို့အမှုအရာမှကျေနပ်လိင်။ ပြန်သောနေ့၌အခါညမ်းပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းသွား။၊သာဆွံ့အရည်အသွေးဗီဒီယိုများအားဖြင့်၊ဒီနေ့ရဲ့စံချိန်စံညွှန်း။, ညစ်ညမ်းသောဂိမ်းများ၊ဒါပေမယ့်သူတို့ကကိုယ့်တဦးတည်းခြေလှမ်းနောက်ထပ်အဖြစ်သူတို့မှာကန့်သတ်အလှန်။ အချိန်နှင့်အတူ၊အပြာလုပ်ငန်းကိုစောင့်ရှောက်နှင့်အတူတက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာတော်လှန်ရေးနှင့်ရရန်သေချာလုပ်အတွက်ပိုမိုနီးကပ်အသုံးပြုသူဤနည်း။ ဒါကြောင့်ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျွန်တော်တို့ဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအများခံစားယုတ်ပျော်စရာအွန်လိုင်း။ အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်မှာဒီလိုလုပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေအားဖြင့်ကစား ၃D ကားဂိမ္း။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ ၃D အတွက်ဂိမ်းကစားခဲ့ပြန်ထိုရှစ်ဆယ်အတွက်။ ဒါဟာအရာတစ်ခုခုမဖြစ်ကြောင်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်၊ဒါပေမယ့်မျှအထင်မှား၏၃D အဖြစ်မှန်။, ဆဲ၊ကအုတ်နှင့်မြင်ရဖို့ပျော်စရာ၊အထူးသဖြင့်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာတွင်အတူဂိမ်းသေတတ်သောနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်၊Wolfenstein ၃D၊သို့မဟုတ်ပျက်မယ့်!. ဒါပေမယ့်အချိန်နှင့်အတူ၊ဒါကြောင့်အဆင့်မြင့်နှင့်ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျနော်တို့ကအဘို့အယူခွင့်ပြု။
အတူဒါကြောင့်အများကြီးအတွက်သုံးစွဲအချိန်ကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်၊၃D ကားဂိမ္းကန်အမှန်အဤငရဲ၏အလမ်းကိုသတ်ပစ်ရန်အချိန်နှင့်ပျော်စရာရှိသည်။ သူတို့အတွက်နှင့်ငါတို့ကိုပေးကြီးမြင်လိုက်အားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အခြေအနေ။ အပြားရှိနေကြသည်မဟုတ်အမှုအရာသငျသညျပွုနိုငျဒီမှာ။ အခါဝင်တစ်ဦးဤကဲ့သို့သောဂိမ်း၊သင်ရ teleported သို့အခြားကမ္ဘာခံစားရကြောင်းဒါကြောင့်။ ကိုမှစွမ်းရည်ကိုပတ်ပတ်လည်ကိုကြည့်လျှင်သင်အမှန်တကယ်ရှိပါသည်။ အဘယ်အရာကိုပင်ပိုနှိုးဆွနေကြတယ်အစစ်အမှန်ဘဝဇာတ်ကောင်ရပ်နေသောသင်၏အရှေ့တွင်၊သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေနှင့်အတူကစားရန်။, ဤသူအများစုဟာ ၃D ကားဂိမ္းပေးဖို့ရွေးချယ်စရာဇိုင္းဤသူငယ်နှင့်အောင်သူတို့ကိုစုံလင်သောသင့်စိတ်ကြိုက်သည်နှင့်အညီ။ ဒါဟာဆိုလိုစေခြင်းငှါဖွင်တစ်စုံတစ်ယောက်သင်တို့အပေါ်မှာကြိတ်သို့မဟုတ်သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်မှတစ်ဦးကရုပ်ရှင်။ ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့်အသိမ္ဇဒါပေမယ့်နှင့်အတူကိုယ်ဝန်ဆောင် woohoo။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးကစားနှင့်အနိုင်အမွာလူသတ်သမားအခါကျွန်တော်တို့ချိတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင္းနှင့်အတူပူပြင်းမိန်းကလေးနှင့်တော့မမြင်မှရလာသောအစစ်အမှန်အရေးယူ။ ကောင်းစွာ၊ဒီနေရာမှာသင်တွေ့မြင်ရ။ နှင့်ပိုပြီးအရေးကြီးတာက၊သင်ကိုထိန်းချုပ်ရ။ သင်ရှိသည်အမျိုးအသံုးေသင်အမြဲလိုသကဲ့သို့သင်တို့ဆို၊ခ်စ္စ။, နိုင်ကြသည်ခလုတ်ကင်မရာကိုထောင့်၊ရာထူး၊အများ၏ပြင်းထန်မှုစုတ်၊အားလုံးကြောင့်။ သငျသညျအရရှေ့တော်၌ထိုမင်းအစည်းအဝေးများ၊သင်လုပ်နိုင်ဒီဇိုင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုရွေးချယ်ပါ။ သို့မဟုတ်သူတို့ကိုသင်ရှိသည်နိုင်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအဝတ်ကိုပြုလေသမျှ။ ဤအများအပြားလည်းသင်စေရှုခင်းဒီဇိုင်းကိုနှင့်အကောက်အဘယ်မှာရှိသင်သွားချင် humping။
ထို့အပြင်၊သင်ရွေးချယ်နိုင်ကြသည်မည်မျှမိတ်ဖက်ဖို့ဆန္ဒရှိနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံ။ ထိုလမ်းများကိုစုစည်းပူ threesomes သို့မဟုတ်ရလဒ်တွေ orgies။ တချို့လူတွေကမကောင်းလုံလောက်ရုံမျှနှင့်အတူမိတ်ဖက်၊ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မထည့်အခြားသူကိုကစား? ဤအတူ ၃D ကားဂိမ္း၊အရဖြစ်လာ၏ဖန်ဆင်းရှင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကား။။။။။ အားလုံးအကြိုးဖြစ်ကြောင်းသင်တို့လက်၌ရှိ၏နှင့်ဖြစ်ပျက်အဘယ်အရာကိုသင်ရွေးချယ်။ ဒါဟာအများကြီးပိုကောင်းလမ်းခံစားဖူးရုံစောင့်ကြည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်။ နှင့်ဤအချို့ကို၊သင်လည်းအခွင့်အလမ်းရှိသည်တွေ့ဆုံရန် pornstars နေသောဘာမှလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိသည်။, မအားလုံးအလုပ်၊သူတို့ကိုသူတို့လှည့်ကြောအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အဖြုန်းဖို့တစ်ဦးတည်းအချို့သောအချိန်နှင့်အတူသင့်ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံး။ ဒါ့အပြင်၊ရှိပါတယ်ဇာတ်ကောင်များထဲကသင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကာတွန်း၊ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊တီဗီရှိုးများနှင့်များစွာသောပို။ ထိုကွာခြားချက်အကြောင်းသူတို့အားလုံးအတွက်ဆာလောင်မွတ်သိပ်သံုးေ၊သူတို့စေလိမ့်မည်ဘာမှမ။ သင်ရှိသည်နိုင်ဖခင် Croft စို့သင့်ဒစ်များအတွက်နှစ်နာရီသို့မဟုတ်သွားလာရင်းအပေါ်တစ်ဦးလိင်အပျော်နှင့်အတူစိတ်ကူးလေးယောက်ျားတွေ။ အတူ ၃D ကားဂိမ္း၊သာသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းနိုင်ပစ္တင္ၾ။ သင်ပြုမှအခမဲ့သင်ကြိုက်သလောက်နှင့်သားရေသင်လိုချင်တဲ့အတိုင်း။
ဤရွေးချယ်ရေး ၃D ကားဂိမ္းကိုကူညီနိုင်သင်သည်သင်၏လိင်ဘဝ။ ဒီနေရာတွင်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်သစ်သောအမှုအရာမှထွက်ကြိုးစားဖို့အတွက်သင်၏အိပ်ခန်း(သို့မဟုတ်အခြားနေရာများ)။ စကားပြောသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူအကြောင်းလိင်ဆက်ဆံဖြစ်စေခြင်းငှါ၊အချို့သောလူများအတွက်စိန်ခေါ်မှု။ သင်ကြိုးစားချင်တယ်တိကျသောအရာတစ်ခုခု၊ဒါပေမယ့်သင်သည်အသေအချာမည်သို့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ခံစားရနိုင်တယ်အကြောင်းစိတ်ကူး။ အတူ ၃D လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်များနှင့်လိင်စတိုင်များ၊သင်ကကစားနိုင်ပါတယ်၊ဒီဂိမ်းနှင့်အတူသင့်ရဲ့အခြားတစ်ဝက်။ ထိုလမ်း၊သင်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်အဘယ်အရာကိုရှင်းပြသင်ကြိုးစားချင်၊ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုပြ။ ဒါကြောင့်နားလည်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်တစ်ခုခုမှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်။, အဖြစ်အားလုံးဒီမြင်ကွင်းများမှာဆူပူ၊သင်၏ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အသင့်ရဲ့လိင်အားပေးအားမြှောက် buddy ထွက်ကြိုးစားဖို့အချို့သားရေတွေ။ အပြင်၊ကိုယ်အမှုအလိုကိုမေးပါ၊ဒါကြောင့်သင်ကြိုးစားနိုင်ပါသူတို့ဒီမှာပထမဦးဆုံးနှင့်ကြည့်လျှင်သင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ မရှိကန့်သတ်ခြင်းနှင့်သင်သွားနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ဝေးသင်လုပ်ချင်တယ်။ အတွက်အဲဒီအချို့ကို၊သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်အစာကြည့်လို၏။။။။။ ထိုလမ်း၊ထိုသို့ကြည့်ရှုမည်ကိုတောင်ပိုလက်တွေ့ကျပြီးပျော်စရာရရှိနောက်ထပ်အဆင့်တွင်သေချာသည်။ အတွက်ဖော်ပြခဲ့သောသမုဒ္ဒရာဟုခေါ်သောအင်တာနက်ရှိပါတယ်၊အများအပြားဂိမ်းတွေ့ရှိခံရဖို့။, သို့သော်အားလုံးမဟုတ်သူတို့ကိုအတွက်နှင့်ငါတို့ကိုပေးဤမျှလောက်များစွာသောရွေးချယ်မှုများဒီလိုကလေးကိုဒီနေရာမှာပါဘူး။ တစ်ချိန်ကသင်ကသူတို့ကိုထွက်ကြိုးစား၊သင်ကစွဲဖြစ်လာအများအပြားကဲ့သို့အခြားသူများမီ။ သို့သော်မကြောက်ဖြစ်၊သာရှိပါတယ်အပေါ်အပြုသဘောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသင့်ရဲ့လိင်အသက်တာအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနာရောဂါငြိမ်းစရာ။ ဒါကြောင့်ကစားစတင်ပြီးပေါများကြွယ်ဝထည့်ပြီးမတူကွဲပြားမှု၏အသက်တာသို့။